Umhla My Pet » Impress Nge Online Dating Your Yabucala Photo
ukubuyekezwa: Jan. 18 2021 | 3 min ukufunda
Ukuba ucinga ukuba ukhetho lwakho photo ukunxulumana iprofayile yakho intanethi akunamsebenzi kangako, Cinga kwakhona. Enyanisweni ifoto iprofayili ngomnye wemiba ephambili ekumiseleni ukuba kukho dater online uya iprofayile yakho ujongo yesibini. Kwaye ukuba babecinga wokunxulumana ifoto neprofayile yakho, abalindelanga ukufumana naziphi na iimpendulo. Many online daters specify their searches through online dating profiles to only show the results of people with photos. Online iprofayili ukuthandana photo yinxalenye ebalulekileyo ekuqinisekiseni impumelelo lakho ehlabathini ukuthandana online.
nakwa osabela ngayo inokuba Wasixhoma picture onalo ngokwakho xa ukhetha photo zakho kwiprofayile yakho ukuthandana online. Iyaqondakala into ofuna ukuzenza akukhangeleki enomtsalane kangangoko online emva zonke, ukhangela ilungelo umhla? kakuhle, ube nembono epha- ukukhetha iprofayili ukuba ummeli intwana engakumbi ngendlela ngokwenene khangela, onqwenela njani wajonga.
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, ifoto iprofayili yenye yezinto eziphambili uqiniseke indoda okanye ibhinqa ukuya kwenye njengomdlalo nokuba online. Ukuba ufake i ifoto oko ngokuchanileyo ukumela indlela ngokwenene khangela (photo wakho iminyaka eliqela ubudala, woba umzuzile 20 lbs ekubeni ifoto yakho, okanye ifoto yakho iye yaguqulwa ukuba ujonga nomtsalane) Umhla wakho uya zaziba bacinge engalunganga kuni khangela njani. Ukuba usebenzise emngciphekweni omkhulu ngokuphoxa umhla wakho nokuphuhlisa nemiba trust yasekunene ngophini xa udibana buqu kwaye khangela kancinane eyahlukileyo kunaye yena okanye yena ebalindile.
Ngaxeshanye, qinisekisa ifoto yakho sengqiqweni nokubizwa. Nangona awufuni ukuba ukunika uluvo engeyizizo ngendlela ngokwenene khangela, khumbula, ukuba basazama ufumane umhla. Musa ngeposi umfanekiso kwiprofayile yakho ukuthandana online ixesha xa zineenyanga ezine lilindelwe iinwele okanye mini walibala ukubeka phezu make-up. Cela umhlobo okanye emibini apho iifoto Unokuyivelisa iimpawu lakho ngoxa wayenikela bacinge kakuhle izinto ujonga babunjani ngemini elungileyo.
Ukuba ukhetho afake iifoto ezininzi ngokwakho, ukwenza njalo. For your main profile photos, it is probably best to get a nice head and shoulder shot so that your profile browsers can get a good sense of what you look like. kodwa, Bacinezela multiple photo ukhetho ngokusebenzisa njengethuba ukubonisa ezinye iimpawu zakho ezizodwa kakhulu nobuntu. Khetha imifanekiso ebonisa nawe wonwabe, inxaxheba kwimisebenzi yangaphandle, okanye 'kwi izicwangciso ezintle zendalo.
Online Dating Profile Photo Tips ezongezelelweyo
– Qinisekisa ukuba noncumo kwi ifoto yakho. Ufuna ukunika isakhono umdlalo bacinge ukuba ukulungele ukuqalisa olonwabisayo ezintle umntu onwabe.
– Ngaba iifoto ezibonisa ulwazi lobuqu malunga umsebenzi lakho okanye indawo ohlala ngeposi. Ukuba kulubeka umfanekiso ukuba umi phambi kwendlu yakho kunye nedilesi ebonisa umqondiso ekwakheni yakho ofisi, ukuze isenokubonisa ulwazi kumalungu ukuthandana intanethi kunokuba ubufuna. Gcina ifoto yakho engaziwayo kunokwenzeka.
– Gcina engqondweni ukuba ufuna ubonisa abanye xa ukhetha ifoto yakho. Musa kuyinyamezela imifanekiso kuni ukusela okanye unxilile, ebengezelayo lwecamera, okanye kukroba intaka ukuba ufuna ukuthandana ngokuthandana.